Soomali waa kee? Qaybtii Koowaad. – HORNAFRIC MEDIA
Posted on May 14, 2018 by Kaafi
Soomaali waa kee? Part 1.
Dhacdooyinka ka dhacay dalka Soomaliya ma jecli in aan dhamaantood intaan hayno idin la wadaagno Xanuunka ay Xambaarsan yihiin awgood laakiin maanta waxaan ka doorbidnay in aan idiin soo bandhigno Midaan si aynu dhamaanteen ugu cibra qaadano Dunuubta Dusha sare ka da-dadan iyo meesha dhabtaa ee aan joogno.
Faadumo waa hooyo dhalin yaraa waxay da-ganayd Muqdisho laakiin ma ahayn dadka deegaanka ka soo jeeda. Markii la riday Dawladii Maxamed Siyaad Barre ayaa isla markiiba waxaa la dilay Nin keedii oo aan ka mid ahayn Shaqaalaha Dawlada..
Faadumo oo ka fakiraysay waxii ay samayn lahayd dhabtana ku haysta Wiil yar oo Hal Bil Jira ayna Caruurta intooda kale oo ah Afar Gabdhood oo ay dhashay ay agteeda ku cayaarayaan ayaa waxaaa gurigeeda soo galay markiiba Niman badan.
Mid ka mida ragii usoo galay ayaa ka dafay ilmihii u saarnaa Dhabta Faadumo , markaas buu kuwii kale ku yiri ” Waa Wiil”
Asaga oo raba in uu ku dilo Xabad Wiilkii Yaraa ayaa midkii hogaaminayay ku yiri
“Xabada hanooga Qasaarin ee Dhagax ku dil.”
Waxuu qaatay Amarkii ninkii Hogaamiyaha u ahaa markaas waxuu dhigay Wiilkii Yaraa Dhulka ayagoo kuwii kale haya Hooyadii dhashay ilmaha.
Ninkii Ilmaha Qaaday ayaa Madaxa Dhagax kaga dhuftay Wiil kii Yaraa.
Wiil kii Yaraa waa dhintay. Markaas ayaa waxaa aad u qayliyay Hooyadii dhashay ilmaha oo u jeeday ficilada foosha xun ee lagula kacay Saqiirkeeda.Faadumo waa Oyday waxaana qayladeedii ku soo baxay dariskii oo dhan…
Ragii falkaas gaystay dhamaantood waa carareen..Hooyo Faadumo markiibaa Miyir iyo Maskax dambe ugu dambaysay…Waa waalatay..
Ayaandaro, dadkii dunuubtaas gaystay iyo kuwo kale oo la mida waxaa Soomaaliya looga dhiibay Xilalka ugu sareeya sida Aqalka Sare, Axdi Qarameedka Dalka, , Laanta Socdaalka, Ciidanka NISA, Gagida Diyaaradaha iyo kuwo kaloo badan.
Waxaad is waydiisaa ma anagaa waalan mise dalka iyo dadka ayaa waayay qof u naxa?
Maxaa loo waayay idaacadaha Xamar oo ka hadlaya? Maxaa loo waayay qof Madax ah oo Geesiya oo Nadiifiya dadkaan Dunuubta dalka iyo Dadka ka galay si umadu isugu soo dhawaato.?
See u raadinaa 100 Faadumo iyo Faarax oo kalaa oo dhibka aan yarayn loogu gaystay dalkooda Hooyo Shalay iyo Doraad oo u baahan in la dhayo Boogaha Xanuunka badan ee soo gaaray si dhamaan umada Soomaaliyeed u arkaan?
Hadaba Soomaali waakee? Makii dilay dhalaanka Faadumaa, makii daweeyay Faadumaa? Makii Xaqeeda usoo dhacshaa?
Ogow Marka inta kii shalay Qabiilka Wax ku dilay uu yahay Madax ama uu haysto taageerayaal daboolaya Dunuubtii uu ka galay dalka iyo dadka in ay adagtahay in la hello dad Fayow iyo Dal Soomaaliyeed oo jira….
Ragaab Maxay ka Yihiin Soomaaliya maxayse ka gaysteen?
La soco Jawaabta Alle…..Part2
Shirkii Madaxda DG oo Baydhabo ka Furmay…Daawo